Dental Emergency | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Kukuvadza Kumuromo Kunogona Kugona Kuve Akakomba Zvakanyanya & Haifanire Kufuratirwa
KuOptismile, vanachiremba vedu vemazino vakasarudzika vanokwanisa kubatsira mukukurumidzira zviitiko uye kudzorera mashandiro nekukurumidza uye zvinobudirira, kudzikisira njodzi yekukuvara zvachose nekuenderera mberi nekurapwa mune inotevera nhanho. Kana zvikaitika zve emergency, isu tinovavarira kuona iye murwere nekukurumidza sezvazvinogona uye kusarudzika kusarudzwa kuchapihwa.
Kana iwe uine mazino emergency; senge mazino, rakatemwa kana rakarasika zino kana zvinhu zvakanamirwa mumazino, unogona kubva wabata vanachiremba vemazino pamitsara yeWhatsApp yakatsaurirwa. Ivo vanozopindura nekukurumidza sezvazvinogona uye vanokuraira iwe nezve nzira yekudzora iyo kukuvara kusvikira musangano ungarongwa.
Pane mitemo mishoma yechigumwe yekutevera kana paita dambudziko remeno: Kana zino rave kure, iwe unofanirwa kuedza kurichengeta rakanyorova kudzamara wagadzwa - kurinyudza mumukaka kazhinji ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Kana uine zino rakatsemuka kana rakachekwa, sukurudza mukanwa nemvura inodziya kuti urambe wakachena uye wozora inotonhora compress yekudzora kuzvimba. Mazino anogona kuratidza chinetso chakakomba chemazino saka zvakakosha kuronga musangano uye kuita kuti nzvimbo yakakanganiswa iongororwe zvakakwana. Usazora aspirin yakanangana nemazino kana mazino, asi sukurudza nzvimbo nemvura inodziya nguva dzose kuti igare yakachena kudzamara wakwanisa kutiona. Chinhu chakanakisa kuita kana paine dambudziko remeno ndere kutishanyira pane zvatinoita muSea Point. Dambudziko remeno harifanirwe kutorwa zvishoma, uye vanachiremba vemazino vakarovedzwa vanokubatsira kuwana mhedzisiro yakanaka nekukubatsira iwe nekukurumidza sezvinobvira kuti kukuvara kuderedzwe.